विश्वासको जीवनको निर्देशिका​ - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
प्रार्थनाको विषय के हुनुपर्छ होला ?
परमेश्वरको सहयोगविना हामीले आफ्नो शक्तिद्वारा केही पनि गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले परमेश्वरसित सहयोग मागेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (मत्ती ७:७-८), र अदृश्य संसारबाट हाम्रो प्रार्थनामा कान लगाउनुहुँदै सधैँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । यसकारण हामीले सधैँ लगनशीलताका साथ प्रार्थना गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ (१ थेस ५:१७) । त्यसोभए हामीले कुन-कुन विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ होला ? बाइबलद्वारा विस्तृत रूपमा…
प्रार्थना कहिले गर्नुपर्छ ?
बाइबलमा हेर्ने हो भने असङ्ख्य विश्वासका पुर्खाहरूले प्रार्थनाद्वारा कठिनाइहरूलाई जितेपछि परमेश्वरबाट आशिष् पाएको यथार्थता जान्न सकिन्छ । मुक्तिदाताको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले पनि प्रार्थनाद्वारा सुसमाचारको कार्य पूरा गर्नुभयो । यसरी प्रार्थनाचाहिँ ख्रीष्टियानहरूबाट अलग गर्नै नमिल्ने विश्वासको एक हिस्सा हो । प्रार्थनाले परमेश्वर र हामीबीच सम्बन्ध गाँस्ने कार्य गर्दछ । तसर्थ हाम्रो चाहना परमेश्वरसमक्ष व्यक्त…
प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ ?
प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको आत्मिक वार्तालाप हो । त्यसैले परमेश्वरको अस्तित्वमा दृढ विश्वास गर्नुपर्छ, र हामीले मागेको कुरा उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने विश्वाससाथ सारा हृदयले प्रार्थना गर्नुपर्छ । हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्नेबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौं । १) सर्वप्रथम उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको निम्ति गरेको प्रार्थना वा परमेश्वरको…
प्रार्थना किन गरिन्छ ?
प्रार्थना गर्नुपर्ने कारण के होला ? कुनै उद्देश्यविना यतिकै प्रार्थना गर्ने मानिसहरू पनि छन् । तर यदि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कारण बुझेर स्पष्ट उद्देश्यका साथ प्रार्थना गर्छौं भने त्यो साँचो प्रार्थना बन्नेछ । त्यसोभए अब प्रार्थना किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछौं । १) परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन जीवनयापन गर्ने क्रममा परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहलाई महसुस…
प्रार्थना भनेको के हो ?
प्रार्थनाचाहिँ परमेश्वरसँग आशिष् माग्ने विधि हो । अनि आफैले समाधान गर्न नसक्ने विभिन्न कठिन परिस्थितिहरू आइपर्दा परमेश्वरको न्यानो निगाहद्वारा सहयोग माग्ने विधि हो । मानिसलाई यो संसारमा जिउने क्रममा अर्को मानिसको सहयोगको आवश्यकता पर्ने समयहरू धेरै हुन्छ । तर मानिसको क्षमता र शक्ति सीमित हुन्छ । हामी परमेश्वरको सहयोगविना बाँच्न सक्दैनौं । तसर्थ हाम्रो कमजोरी…
सबै बन्द गर्ने
परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष् पाउनको निम्ति हामीले कसरी शबाथ-दिनको तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारे पत्ता लगाऔं । पहिलो, हामीले तयारीको दिनद्वारा शबाथ-दिनको तयारी गर्नुपर्छ । शबाथ-दिनको अघिल्लो दिनलाई शबाथको तयारी गर्ने भन्ने अर्थमा तयारीको दिन भनिन्छ । हामीले हाम्रो व्यक्तिगत कामकाजहरू सबै शबाथ-दिनको अघिल्लो दिनमै सिद्ध्याउँदा राम्रो हुन्छ, किनभने शारीरिक कामकाजले हामीलाई शबाथ-दिनमा आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न…
आराधकको मनस्थिति र व्यवहार
आराधकमा परमेश्वरलाई आदर गर्ने मनस्थिति हुनुपर्छ । जस्तै, यदि हामी राजालाई भेट्न लाग्दैछौं भने त्यसको लागि पूरै तयारी गर्ने गर्छौं । त्यसोभए सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुभएका परमेश्वरलाई भेट्न हामीले झन् कति धेरै तयारी गर्नुपर्छ होला ? सर्वप्रथम हामीले आराधनाको महत्त्व र आशिष्‌‌लाई महसुस गर्नुपर्छ, अन्य कुनै कुरालाई भन्दा आराधनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, र धन्यवादी मनले…
कुनै पनि धर्मविधिको क्रम हुन्छ । हामीले परमेश्वरलाई चढाउने आराधनाको पनि क्रम छ । स्थानीय मण्डलीको विशेष अवस्थाअनुसार आराधनाको क्रम थोरै फरक हुन सक्छ । सामान्यतया आराधनाको क्रम निम्नानुसार हुन्छ : १) मौन प्रार्थना आँखा बन्द गरेर भक्तिपूर्ण मनले परमेश्वरलाई मौन प्रार्थना गरिन्छ (भज १४३:५) । २) महिमा स्तुति योचाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहप्रति धन्यवाद र महिमा…
आराधना भनेको मरणशील हामी मानव-जातिलाई अनन्त जीवन, आशिष् र मुक्ति दिनुभएर हाम्रो पाप सित्तैँमा क्षमा गरिदिनुभई स्वर्गमा डोऱ्याउनुहुने परमेश्वरको उदात्त प्रेमप्रति धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थना र स्तुतिद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्ने अनि आफूलाई विनम्र तुल्याएर परमेश्वरलाई आदर गर्ने धर्मविधि हो । त्यसोभए हामीले आराधना कहिले गर्नुपर्छ होला ? परमेश्वरलाई आराधना गरिने दिनहरू यस प्रकार छन् : पहिलो,…
आराधना गर्नुको उद्देश्य
हामीहरू वास्तवमा स्वर्गमा पाप गरेका पापीहरू हौं । त्यसोभए हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको उद्देश्य के होला ? पहिलो, परमेश्वर र हामीबीचको सम्बन्धलाई बलियो पार्न हामीले सेवा गर्नुपर्ने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ । परमेश्वर स्वयम् आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभएर मानिसलाई जीवन र सास दिनुभएका र पापी हामीलाई बचाउनुभएर सत्यताको वचनद्वारा स्वर्गको प्रतिज्ञा गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ…
सन्तहरूले एक-अर्कालाई सेवा गर्नुपर्ने कारण
परमेश्वरले “सेवा गर्ने होओ” भन्नुभएको छ । स्वर्गीय सन्तान हामीहरू परमेश्वरको शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्दै परमेश्वरले खुशी मान्नुहुने स्वर्गीय सन्तानहरू बन्नुपर्छ । सन्तहरूले एक-अर्कालाई सेवा गर्नुपर्ने कारण के हो, बाइबलद्वारा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौं । पहिलो, ख्रीष्ट स्वयम्‌ले सेवाको उदाहरण देखाइदिनुभएकोले “… तर जो तिमीहरूमा ठूलो हुने इच्छा गर्दछ, त्यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ । जो…
हामीले एक-अर्कासित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ होला ?
सन्तानहरू एकतामा रहँदा परमेश्वर खुशी हुनुहुन्छ (भज १३३:१; फिलि २:१-२) । तर यदि हामीहरू एक-अर्कासँग रुखो व्यवहार गर्दै विचारशील हुँदैनौं भने एकतामा रहन कठिन हुन्छ । यसकारण हामीहरू प्रेमको मनद्वारा एक-अर्काप्रति नम्र र विचारशील हुँदै परमेश्वर खुशी हुनुहुने एकतामा रहनुपर्छ । अब, हामीले एक-अर्कासित कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेबारे पत्ता लगाऔं । पहिलो, हामीले शिष्टतापूर्वक एक-अर्कालाई…
बोलीचाहिँ हाम्रो व्यक्तित्व झल्काउने ऐना हो, किनकि बोलीमा हाम्रो विचार र भावना समावेश हुन्छ । यसकारण मुक्तिको प्रतिज्ञा पाएका परमेश्वरको सन्तान भएअनुरूप हामीले अनुग्रह र धन्यवादले भरिएको बोलीद्वारा परमेश्वरलाई महिमा चढाउनुपर्छ । अब, हामीले कस्तो बोली बोल्नुपर्छ भन्नेबारे बाइबलमार्फत अध्ययन गर्नेछौं । १. हामीले डाहलाई त्यागेर असल बोली बोल्नुपर्छ । तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, तर…
हामीले कस्तो बोली बोलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भन्नेबारे लगातार अध्ययन गर्नेछौं । १. धन्यवाद दिने बोली तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँसमेत नलिइओस्, जो सन्तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन । कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचीत अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नू, यी सुहाउने कुरा होइनन् । तर बरु धन्यवाद दिने काम होस् । किनकि यो…
बोलीद्वारा पाइने आशिष् र श्राप
बाइबलमा बोलीद्वारा आशिष् पाएका मानिसहरू र श्राप पाएका मानिसहरूको इतिहास अभिलेख गरिएको छ । उनीहरूको इतिहासमार्फत हामीले कस्तो बोली बोल्नुपर्छ भन्नेबारे विचार गरिहेरौं । १. स्वर्गको राज्यका साँचाहरू पाएका पत्रुस येशू … “तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ ?” सिमोन पत्रुसले जवाफ दिए, “तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र ।” येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “योनाको छोरो…
‘एउटा बोलीले भारी ऋणसमेत चुक्ता गर्छ’ भन्ने भनाइ छ । एउटा बोलीको प्रभाव साँच्चै ठूलो छ भन्ने अर्थ हो । परमेश्वरले पनि बाइबलका थुप्रै वचनहरूद्वारा बोलीको महत्त्वबारे शिक्षा दिनुभएको छ । बाइबलमार्फत बोलीको महत्त्वको विषयमा अध्ययन गरौं । १. बोली हाम्रो हृदयमा भएको कुरालाई प्रतिबिम्ब गर्ने ऐनाजस्तै हो । “कि रूखलाई असल बनाओ, र त्यसको…
हामीले किन परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ होला ? यसको कारण हामी बाइबलद्वारा पत्ता लगाऔं । १. हाम्रो आत्माको जीवनको निम्ति परमेश्वरको वचन जीवनको भोजन हो । येशूज्यूले मानिस परमेश्वरको वचनले जीवित रहँदछ भन्नुभएको छ । तर येशूले जवाफ दिनुभयो, “लेखिएको छ, ‘मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ’ ।” मत्ती…
परमेश्वरको वचन पूर्ण छ
परमेश्वरको वचन पूर्ण छ र यसमा कुनै अपवाद छैन । परमेश्वरले उहाँको वचन पूर्ण रूपमा पालन गर्ने मानिसहरूलाई मात्र आशिष् दिनुहुने भएकोले परमेश्वरको वचनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नु नै आशिष् र मुक्तिको एकमात्र बाटो हो । १. नोआको जहाज पानी नै नपरेको त्यो समयमा परमेश्वरले नोआलाई ठूलो जहाज बनाउन आदेश गर्नुभयो । परमेश्वरले आदेश गर्नुभएको…
धैर्य धारण गर्नुपर्ने कारण
विश्वासको जीवनमा हामीले धैर्य धारण गर्नुपर्ने कारण के होला ? बाइबलमार्फत यसको कारण पत्ता लगाऔं । १. उद्धार पाउन “भाइले भाइलाई मृत्युको लागि पक्राइदिनेछ, र बाबुले छोरा-छोरीलाई, र छोरा-छोरीहरू आमा-बुबाहरूका विरुद्धमा उठ्‌नेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन् । मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुनेछौ । तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ, त्यसैको उद्धार हुनेछ ।” मत्ती…
धैर्य धारण गरेर आशिष् पाएका विश्वासका पुर्खाहरू
बाइबलमा, धैर्य धारण गरेर आशिष् पाएका विश्वासका पुर्खाहरूका कार्यसम्बन्धी थुप्रै अभिलेखहरू छन् । तिनीहरूको कार्यद्वारा, यो युगमा हामीले लिनुपर्ने धैर्यताको मनस्थितिबारे अध्ययन गर्नेछौं । १. अय्यूबको धैर्यता परमेश्वरले हेर्नुहुँदा अय्यूब धर्मी र निर्दोष मानिस थिए । छोरा-छोरीहरू पनि धेरै भएका तिनी समृद्ध थिए, अनि तिनलाई कुनै कुराको कमी थिएन । अय्यूबको डाह गरेको शैतानले अय्यूबलाई…
परीक्षालाई जितेका विश्वासका पुर्खाहरू
शैतानले संसार सृष्टि भएको समयदेखि नै परमेश्वरका सन्तानहरूलाई परीक्षामा पार्न विभिन्न धूर्त चाल चल्दैआएको छ । हामीले परमेश्वरको आशिष् पाएर अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्नको निम्ति शैतानका यस्ता परीक्षाहरूलाई जित्नैपर्छ । बाइबलमा शैतानको परीक्षालाई जितेर आशिष् पाएका विश्वासका पुर्खाहरूको कार्यसम्बन्धी थुप्रै अभिलेखहरू छन् । तिनीहरूको कार्यबारे अध्ययन गरेर हामीहरू परीक्षालाई जित्नको निम्ति लिनुपर्ने विश्वासबारे जान्ने समय…
शैतानको परीक्षा र विजय
शैतानले सधैँ मान-सम्मान, स्वार्थीपना, झैँझगडा, घृणा, अधिकार, पैसा, माया-मोह, ईर्ष्या, लोभ, प्रतिष्ठा, गौरव जस्ता सांसारिक कुराहरूको प्रलोभन देखाएर हाम्रो मनलाई अन्यत्र भुलाउन खोज्छ । त्यसो गर्दै हाम्रो विश्वासलाई कमजोर पारेर त्यसले हामीलाई स्वर्ग-राज्य जानबाट वञ्चित गराउन खोज्छ । शैतानका यी सम्पूर्ण परीक्षाहरूमा विजयी भएर स्वर्ग प्रवेश गर्ने दिनसम्म हामीले आफ्नो विश्वास जोगाउनुपर्छ । १. शैतानले…
सियोनमा भेला हुन प्रयत्न गर्नुपर्ने कारण
छोरा-छोरीहरू एकसाथ भेला हुँदा बुबा-आमा खुशी हुनुभएजस्तै, परमेश्वर पनि उहाँका सन्तहरू एकसाथ भेला भएको चाहनुहुन्छ, र त्यसरी भेला भएको ठाउँमा आशिष् दिनुहुन्छ । “फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये दुई जना कुनै कुरामा सहमत भई केही माग्यौ भने, त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ, किनकि जहाँ दुई कि तीन जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन्,…